Xariir ku ahaanshaha waa dareenka ugu fiican adduunka. Markaad xiriir wadaagtaan, waxaad jeceshahay xaaskaaga / saygaaga; markaa, waa inaad muujisaa jacaylka aad u qabto isaga. Inta badan, ma ogaanno in muujinta jacaylku ay aad muhiim ugu tahay jacaylka. Jacaylku waa tiir kasta oo xiriir ah, kaas oo siiya awood.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu muujiyo jacaylkaaga sida waxaad siin kartaa ubaxyo, dhar xamaali ah iyo waxyaabo kala duwan oo cunto ah. Iyaga korka ah, dhammaan labbiska labiska ah ee lammaanahaaga ayaa u adeegi kara hadiyadda ugu fiican maxaa yeelay dharka ayaa la keydin karaa muddo dheer. Waad habeyn kartaa kuwanlebbiska u dhigma lammaanahaaga munaasabado kala duwan. Halkan waxaan ku falanqeyn doonnaa seddex fikradood oo loogu talagalay labbis labbis sida ku xusan dhacdo kale.
1.Sawirada hore ee arooska.
Aroosku waa ballan qaadka ugu awoodda badan adduunkan. Qof walba wuxuu sugaa maalinta arooskiisa si xamaasad leh wuxuuna doonayaa inuu si buuxda ugu dabaal dago maalintiisa. Aroosyada, waxaan leenahay howlo kala duwan ka hor iyo ka dib maalinta arooska. Sawirka hore ee guurka sidoo kale waa hawl muhiim u ah sida sawir qaadista arooska. Sawir gacmeedkani wuxuu soo bandhigayaa dareenkaaga guurka iyo farxaddaada, labbiska isbarbar dhiga ayaa wax badan ku kordhin doona dareenkaas iyo farxaddan Waad xiran kartaa dhar isku mid ah, mid leh erayga “Mr” kan kalena ereyga “Marwo” Maaddaama sawir-gacmeedyadani hore u yihiin xusuus weligeed ah, dharka isku habboon ayaa ku dari doona farxad iyo reyn reyn xusuustaas.
2.Casha casho ah.
Lamaanayaasha, taariikhdu waa hab fantastik ah oo midba midka kale kaga raaxeysto shirkadiisa. Waxay siineysaa lamaanayaasha inay waqti isla helaan midba midka kale. Waxay siinaysaa iyaga fursad ay ku fahmaan midba midka kale xulkiisa iyo dookhiisa.
Iswaafajinta dharka ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara habeenkaaga taariikhda maxaa yeelay waxaad ku gudbin kartaa dareenka jacaylka adoo adeegsanaya labbiskaan loo habeeyay. Dharkaan ayaa abuuraya xiriir ka dhexeeya lamaanaha. Inta badan, kuma muujin karno dareenkeenna ereyo; waqtigan, waxaan kaliya u isticmaali karnaa dharkaan si aan u muujino dareenkeena.
3.Wada socdaal ahaan.
Socdaalku waa hiwaayadda ugu jecel dadka badankood. Lamaanayaasha badankood waxay ku helaan farxadooda safarka meelo kala duwan. Booqashada boggaga kaladuwan waxay siinaysaa waqti ay isla qaataan. Iswaafajinta labiska ayaa dhameystiri kara safarkooda. Dharkaan ayaa siiya iyaga dareen isku xirnaan ah.
Funaanado isu eg, hoodies, iyo lebbiska ayaa u noqon kara dhammaystir jacaylka lamaanaha. Waxaad xiran kartaa dharkan munaasabadaha kala duwan.